Ijikọ Africa: Rovos Rail malitere iwebata njem mbụ ya, Ọwụwa Anyanwụ na West na Africa.
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ijikọ Africa: Rovos Rail malitere iwebata njem mbụ ya, Ọwụwa Anyanwụ na West na Africa.
Akụkọ kacha ọhụrụ na Angola • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • investments • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Bịa na Julaị afọ a, a ga-ejikọ Rovos Rail iji jikọta Afrịka site na Osimiri Indian na East na Atlantic Ocean na West site na njem ọkara ọkara ya site na Dar es Salaam na Tanzania ruo Lobito na Angola site na ụgbọ oloko ochie ya, bụ Mpako. nke Africa.
A gụrụ dị ka ụgbọ okporo ígwè njem nleta kachasị ọnụ ahịa n'ụwa, ụgbọ okporo ígwè Rovos Rail ma ọ bụ "Mpako nke Africa" ​​ga-esi n'obodo Indian dị n'ụsọ oké osimiri nke Dar es Salaam n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Africa, na-agafe Tanzania, Zambia, na Democratic Republic of Congo (DRC) na Lobito na Angola na Atlantic Ocean.
Ihe a na-atụ anya, njem njem site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke kọntinenti Africa ga-abụ akụkọ ihe mere eme, njem nlegharị anya n'akụkọ ihe mere eme nke Africa iji hụ onye njem njem ụgbọ oloko, nke ndị njem nlegharị anya na-aga n'okporo ụzọ Tanzania na Zambia Railway (TAZARA) ka Kapiri Mposhi di na Zambia.
Site na Zambia, ụgbọ ala mpako nke Africa ga-agafe site na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Zambia site na ọdụ Kapiri Mposhi wee jikọọ na National Railways Company of Congo (SNCC) iji sonye na Benguela Railway na ọdụ Luau na Angola dị nso na ókèala DR Congo na Lobito na Oke Osimiri Atlantik.
Akụkọ sitere n'isi ụlọ ọrụ Rovos Rail dị na Pretoria, South Africa kwuru na njem mbido ga-amalite na July 16 site na Dar es Salaam iji tinye nleta na Selous Game Reserve na ndịda Tanzania, ụgbọ elu na njem abalị abụọ na South Luangwa National Park na Zambia na njem nleta obodo nke Lubumbashi na DR Congo.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ụgbọ oloko, ụgbọ okporo ígwè ga-esonye na Benguela maka njem njegharị dị mkpirikpi na-akọwapụta akụkọ ntolite nke Angola ma mesịa jiri ụzọ epic, njem akụkọ ihe mere eme na-akwụsị na Lobito maka ọdịda, na-apụ njem ụbọchị nke abụọ nke August na-aga otu ụzọ .
Onye isi njikwa Rovos Rail Communications, Brenda Vos-Fitchet kwuru na njem njem ụbọchị 15 gafere Tanzania, Zambia, DR Congo na Angola ga-abụ nke mbụ n'akụkọ ihe mere eme nke mpaghara Africa a na ụgbọ oloko njem ga-esi site n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo ụzọ ọdịda anyanwụ nke jikọtara ọdụ ụgbọ mmiri Indian Ocean nke Dar es Salaam na Tanzania na ọdụ ụgbọ mmiri Atlantic Ocean nke Lobito na Angola.
Ọnụ ọgụgụ njem na nke a, njem njem na-amalite na US $ 12,820 maka onye ọ bụla na-ekekọrịta, dịgasị iche iche dị ka ụdị ụlọ ma jupụta ebe obibi, nri, mmanya na mmanya na mmanya ndị ọzọ, ọrụ ime ụlọ, ịsa akwa, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na dọkịta yana dị ka njem mmụta na njem-na safari abalị abụọ tinyere nnabata, nri, mmiri mmiri na obere mmanya mmanya dị ka ụzọ ewepụtara.
“Inwe ike iwebata ọhụụ ọhụrụ mgbe afọ 29 gachara bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-ewetara m ihe ịma aka ọrụ na-enye ume ọhụrụ. O werela afọ abụọ iji nweta ikike ma nwee usoro njem anyị chọrọ ka ndị ọchịchị dị iche iche kwadoro ya, ”Onye nwe Rovos Rail Owner na Chief Executive Officer Maazị Rohan Vos kwuru.
Mụ na ndị otu m gafere ókèala anyị n'oge ole na ole iji zute ndị isi dị mkpa, na-ebugharị ụzọ ma na-eme nleta saịtị na mgbali iji mezie ụzọ ahụ kachasị mma maka ndị otu anyị na-atụ ụjọ ga-eso anyị. njem a, ”ka o kwuru.
Rovos Rail na-arụkwa ụgbọ oloko dị mma site na Cape Town ruo Victoria Falls na Zimbabwe, yana ọtụtụ njem ndị ọzọ. Traingbọ oloko ahụ mere nwa mbụ ya, njem ugwu na Dar es Salaam na July 1993 ebe ndị njem nleta na-enwe mmasị ịga njem ochie, Edwardian, ndị nkuzi osisi 21 nwere ikike ịnabata ndị njem 72 kpamkpam.
Ndị nkuzi osisi ochie bụ ndị nọ n’agbata afọ 70 na 100, wee nyefee ha ụgbọ ndị kwesịrị njem.
Dabere na Pretoria, South Africa, Rovos Rail ụgbọ oloko ma ọ bụ "Mpako nke Africa" ​​ka atọrọ ka ọ bụrụ eziokwu, ihe mbụ Cecil Rhodes bu n'obi iji jikọtara mpaghara Afrika site na Cape Town na Cairo site n'ọdụ ụgbọ oloko.
Rogbọ okporo ígwè okomoko Rovos Rail na-eso ụzọ ụkwụ Cecil Rhodes si Cape, na-agafe na South Africa ruo Dar es Salaam ma na-ejikọ ndị njem ya n'akụkụ ndị ọzọ nke mpaghara Africa site na netwọọdụ ụgbọ oloko ndị ọzọ dị na East Africa.
Rovos Rail bụ ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ oloko na Pretoria, South Africa. Rovos Rail na-agba agba ochie na njem nleta ndị njem site na usoro oge niile n'okporo ụzọ dị iche iche na South Africa tinyere Victoria Falls mara mma na Zimbabwe na Zambia.
N'oge njem ya na ugwu ugwu na Tanzania, Mpako nke Africa gafere site na akụkọ ihe mere eme na njem nleta mara mma na ndịda Africa gụnyere Victoria Falls na Zimbabwe, Kimberley mines nke South Africa, Limpopo na Kruger National Parks na Osimiri Zambezi.
Na Tanzania, ụgbọ oloko ahụ gafere ebe ndị njem nleta mara mma dị na Southern Highlands gụnyere ọmarịcha Kipengere na Livingstone Ranges, Kitulo National Park, Selous Game Reserve, n'etiti ebe ndị njem nleta ndị ọzọ.
Cairo ike Cape Cape Town isi obodo ịma aka onye isi ala onye isi oche ndị nkụzi Okirikiri ala -abịa nkwukọrịta njikwa nkwukọrịta Congo jikọọ jikọọ Afrika gua Dar Dar es Salaam Democratic Democratic Republic of Congo na-apụ diamond dọkịta Dr nrọ drive East Eastern mgbalị Epic mmụta njem dara efe efe ofufe site game egwuregwu idobere ọkara isi ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme akụkọ ihe mere eme akụkọ ihe mere eme mmalite Indian Oke Osimiri India Nnukwu ike ịme eme njem iso njem njem mgbe e mesịrị Limited akara njikọ Livingstone mara mma okomoko nwa agbọghọ manager nri zuko ọnwa Mr ogige ntụrụndụ nke mba ogige mba netwọk abalị oké osimiri onye nlekọta isi ọrụ arụmọrụ nwe park ogige ntụrụndụ rue njem Na-agafe agafe ikike ebe n'ọdụ ụgbọ mmiri Pretoria Nganga onwe atụ aro okporo ígwè ụgbọ okporo ígwè okporo ụzọ udu -adịbeghị anya mgbe nile tọhapụrụ akụkọ mba Republic nke Congo idobere osimiri ụlọ ọrụ ime ụlọ ụzọ okporo ụzọ Njem Ileta Ụmụ Anụmanụ Ekele oge nke abụọ nhọrọ -ekere òkè obere saịtị saịtị South Africa Southern Southern Africa mmalite ọdụ ụlọ ewere Tanzania Africa Mba tour ihe omume njem nleta njegharị obodo ụzọ ụzọ ụkwụ ụgbọ okporo ndị njem -ejegharị ejegharị njem ụdị Victoria Victoria Falls nleta njem na-eje ije mmiri ụzọ West Western mmanya Zambia Zimbabwe